I-Geofumadas: Izihloko ze-3 ezithandekayo zalo nyaka - ii-Geofumadas
I-Geofumadas: Izihloko ze-3 ezithandekayo zalo nyaka
NgoFebruwari, 2012 Geospatial - GIS, ezintsha
Eminye imiba ebeka ingqwalasela kumxholo wethu usele ndleleni, ndithatha iveki exakekile ukubonisa ukufundwa phakathi kwemizila kunye nemihla ekufuneka ihlelwe.
1. Okwangoku: Uphando kwi-geospatial sector
Ukususela kwiGeospatialtraininges.com sicebisa ukuba sizalise i-questionnaire enxulumene nemeko yethu yomsebenzi. Kule nto kufuneka sihlale sisebenzisana, kuba ngaphezu kokubakho idatha esetyenziswa ngokuyimfihlo kwaye engaziwa, ivumela iinkampani ukuba zihlole imeko yentlalo kwaye zilungelelanise amaxabiso emveliso kunye neenkonzo kwizinto eziyinyani.
Ngokuqhelekileyo, kwimimandla yethu yaseSpeyin, kuhlale kuyimfuneko ukunciphisa amaxabiso ngokubhekiselele ekunikweni kwazo kwiimakethe zase-Anglo-Saxon. Ngenxa yoko, ndincoma ukuxhasa inkxaso. Ukuba ekugqibeleni unomdla ekufumaneni iziphumo zee-statistical zolu vavanyo, unokongeza i-imeyile yakho, nangona kunjalo.
2. Ekufuphi: IForam Yehlabathi YeGeospatial
Inkqubo entsha yeForam ye-World Geospatial Forum, ekhuthazwa yi-Geospatial Media kwaye ngeli thuba ligxile kumxholo, iya kubanjwa kwi-23 ukuya kwi-27 ngo-Ephreli: Icandelo leeGeospatial kunye nezoQoqosho loHlabathi.
Esi siganeko siya kubakho ezininzi iinkampani kunye namaziko athatha inxaxheba ekuveliseni imboni ye-geospatial okanye ukuphuhliswa kwemveliso, ukubonelela ngeenkonzo okanye ulawulo olulawulayo. Nangona eso siganeko sinefuthe elikhulu kwiimeko zaseYurophu, umzobo osekelwe kwii-2,500 abaye babhalisa kwiifom zamva nje kubonisa indlela esi siganeko sifinyelele ngayo kwihlabathi.
EMiddle East 200
3. Kamva: I-Ibero-American Congress yeGeomatics kunye neSayensi yeMhlaba.
Ukususela kwi-16 ukuya kwi-19 ka-Oktobha ye-2012 iya kwenzeka eMadrid X Topcart, ekhuthaza iKholeji esemthethweni yeeNjineli zobuGcisa kwi-Topography yaseSpain. Injongo isoloko ikwazisa ulwazi lwezesayensi kunye nezobugcisa kwi-Topography, iCrographic kunye nezinye i-science ezinxulumene kwiindawo ezahlukeneyo ze-10:
I-1 AREA: IiNkqubo zoLwazi lwee-Geodetic and Cartographic Reference.
I-2 AREA: I-Photogrammetry ne-Remote Feelings.
I-3 AREA: I-Topographic, iNautical and Thematic Cartography.
I-4 AREA: Iinkqubo zoLwazi lweNdawo.
Izixhobo zoLwazi lweZithuba.
I-5 AREA: iGeomatics kwiNjineli yobunjineli,
IMigodi kunye neZakhiwo
I-6 AREA: UCwangciso loThutho, uCwangciso loMmandla
I-7 AREA: iCadastre kunye nePropati.
I-8 AREA: Uphando lwe-geophysical.
ISismology kunye neVulcanology.
I-9 AREA: Uphuhliso kunye neNnovation.
I-10 AREA: uMbutho, iHlabathi kunye noQeqesho.
Post edlulileyo«Edlulileyo I-Geofumadas, i-1 enye kwi-Social Networks
Post Next UGabriel Ortiz, iCartesia kunye neGeofumadas baya kwiProjekthi Z! IzikhalaOkulandelayo "
Enye Impendulo kwii-Geofumadas: I-3 izihloko ezithandekayo zalo nyaka "